U-geliyeen handarraabbadeedii-saareyaasha iyo Shirkado cusub | Shiinaha U-geliyeen handarraabbadeedii Factory
U-bool oo horumarsan sida qayb ka mid ah hardware line cirif.
Tani hardware korontada waa hardware deadend, waxay noqon kartaa isticmaalka la clamps ganaax, indhaha kubad, link saxan kaliya, u-clevis, isha clevis in rakibidda (OPGW - fiilooyin dhulka indhaha) iyo ADSS (oo dhan-dielectric is-taageeraya), AAAC, ACSS, ACSR, nooc u dhashay oo waxay qariyeen of kirishbooyada gudbinta.
Sidoo kale U handarraabbadeedii waxaa loo isticmaalaa sida Xadhig silig clip la qayb ka dhiibtay, si ay u fixate kaari ama Xadhig waxaa gudaha, by adkaynaya nuts ah.
nooca kuwa rakibo inta badan waxaa ka mid ah duuban nin preformed. Macluumaadkan waxaa lagu muujiyay meesha ku xir-line Helical of our web site.
accessories Kuwa maray baaskiil heerkulka iyo imtixaanada gaboobaya, baaritaanka iska caabin ah daxalka, imtixaanka xiisad shirka la pole ku haboon hardware line
xubno ka xoog High yareeyo khatarta cable dhexdeeda Godoo kale ama waxyeello kale inta lagu jiro xilliga howlgalka of line awoodda dusha. Awoodin si ay u dhisaan qaab dhismeedka kalsooni iyo dhib sii kordhaya uga cadhooday ee cable danab sare ee khadadka gudbinta dusha.